ဘယ်လိုဆုတောင်းကြမလဲ | Calvary Burmese Church
Bill Flick ဆိုသူ သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးက လူတွေဆီမှာ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပျက် တတ်တယ်လို့ Pantagraph သတင်းမှာ ရေးသားပါတယ်။ သူကဆက်လက်ပြီးတော့ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေကို အဲဒီအပတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့သတင်းစာဆောင်းပါးမှာ ရေးသားပါတယ်။
– ကွန်နက်တီကတ် ပြည်နယ်မှာ ကားခိုးလာတဲ့ ကားသူခိုးတစ်ယောက်က လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ ရဲကိုအတင်း ရပ်ခိုင်းပြီး မြို့ပြင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ လမ်း direction မေးတယ်။
– အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ၃၅ နှစ်တိုင်တိုင် တစ်ရက်ကို အကြိမ်ပေါင်း တစ်ရာမက နာချေတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ ပြန်ပြီး အလာဂျစ် (Allergic) ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး ကလေးဘ၀ကတည်းကစပြီး သူစားနေကျ ဖြစ်တဲ့ Oat meal စားတာကို ရပ်လိုက်မှဘဲ နာချေတဲ့ ပြဿနာရပ်သွားတယ်။
– ယိုးဒယားနိုင်ငံ ဆင်ကြီးတစ်ကောင်က ဆန် ၁၁၀ ပေါင် စားပြီး ရေ ၆၅ ဂါလံ ဆက်သောက်လိုက်တာ ဗိုက်ပေါက်ကွဲ ပြီးသေသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ လည်း နေ့တိုင်းနာချေ တဲ့သူ၊ ဗိုက်ပေါက်သွားတဲ့အထိ စားသောက်ပြီးသေတဲ့ဆင်ကြိးလို ပြဿနာကြုံဘူးမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် နေ့တဓူဝ ပြဿနာကလေးတွေတော့ ရှိကြပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ပြဿနာနဲ့ကင်းတဲ့လူဆိုတာ မရှိစမြဲပါ။ ရှင်ယာကုပ် ၅း၁၃-၁၆ ကို လေ့လာပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုဆုတောင်းသင့်သလဲ ဆိုတာလေ့လာကြည့် ကြရအောင်။
သင်တို့တွင် ဆင်းရဲခံရသောသူရှိလျှင် ဆုတောင်းစေ။ ရွှင်လန်းသောသူရှိလျှင် ဆာလံသီချင်း ကိုဆိုစေ။ နာသောသူရှိလျှင်၊ သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍ သူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ နာမတော်ကိုအမှီပြုလျက်၊ လူနာကိုဆီနှင့် လူး၍ သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ ပဌနာသည် လူနာကိုကယ်ဆယ်၍၊ သခင်ဘုရားသည် သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်။ သူသည် အပြစ်ပြုမိသော်လည်း ထိုအပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်။ အချင်းချင်း တယောက်နှင့်တယောက်၊ ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြတောင်းပန်ကြ လော့၊ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း အချင်းချင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းကြလော့။ သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီးသောပဌနာသည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏။ (ယာ ၅း၁၃-၁၆)
ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းခြင်း (၃) မျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ဆုတောင်းခြင်း ( ယာ ၅း၁၃)
၂။ သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍ ဆုတောင်းခြင်း (ယာ ၅း၁၄-၁၅)
၃။ အချင်းချင်းတို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်း (ယာ ၅း၁၆)
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘယ်လိုဆုတောင်းသင့်တယ်ဆိုတာကို သွန်သင်ပေးတဲ့အပြင် ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ ဆုတောင်းရမယ် ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောအချိန် (ယာ ၅း၁၃ က)
၂။ ရွှင်လန်းသောအချိန် (ယာ ၅း၁၂ ခ)
၃။ မနာမကျန်းဖြစ်သောအချိန် (ယာ ၅း၁၄-၁၅ က)
၄။ အပြစ်ပြုမိသောအချိန် (ယာ ၅း ၁၅ ခ – ၁၆)
မြန်မာကျမ်းစာအုပ်တွင် ဆင်းရဲခံရသောအချိန်ဟုရေးသားထား သော်လည်း အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် when you suffering ဟုရေးသားသည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် နဂိုမူလဆိုလိုရင်းသည် ဆင်းရဲခြင်း (ငွေကြေးချို့တဲ့ခြင်း) ဆိုသည့်အသုံးအနှုံးထက် ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောအချိန် ဟုဆိုလျှင်ပို၍တိကျမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒုက္ခဆင်းရဲဟုဆိုရာတွင် မကျန်းမမာဖြစ်ခြင်း၊ သေခြင်းတရားကိုကြုံတွေခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း နှင့် ညင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းများစသည်တို့ကို ခြုံငုံ၍ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သော ဒုက္ခဆင်းရဲခံခြင်းမျိုး မိတ်ဆွေ၏ ဘ၀တွင်ကြုံတွေ့ရပါက (ဆာ ၃၄း၃) တွင် “ငါသည် ထာဝရဘုရားကို ရှာသောအခါ နားထောင်တော်မူ၏။ ကြောက် မက်ဖွယ်သော အကြောင်းအလုံးစုံတို့ အထဲက ငါ့ကို ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ “ ဟုဖော်ပြသကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားသခင် သည် မိတ်ဆွေ၏ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအလုံးစုံတို့မှ ကယ်နှုတ်လိုသော ဘုရားဖြစ်သည်ကို အောက်မေ့ သတိရလျက် အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကာ ဆုတောင်းပါ။ အချိန်၊ နေရာ၊ အခြေအနေ မရွေး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရန် ဘုရားရှင်အလိုရှိပါသည်။ (၁ပေ ၄း၁၂) တွင် “ချစ်သူတို့၊ သင်တို့ကို စုံစမ်းစရာဘို့ ယခုခံရသော မီးစစ်ခြင်းအရာကိုကား၊ သင်တို့၌ အံ့ဘွယ်သော အရာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်၍၊ အံ့သြခြင်းမရှိကြနှင့်” ဟုဆိုထားသကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ရသော ဒုက္ခဆင်းရဲအတွက် အံ့သြတွေဝေ၍ စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မဟုတ်ဘဲ သာ၍ ဘုရားသခင်၏ ရင်ခွင်တော်သို့ တိုးဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ ဘ၀တွင်အောင်မြင်၍ ရွှင်လန်းသောအချိန်၊ ပျော်ရွှင်သောအချိန် များတွင် ဆုတောင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂ တွင် “ရွှင်လန်းသောသူရှိလျှင် ဆာလံသီချင်း ကိုဆိုစေ။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျော်ရွှင်သော အချိန်အခါများတွင် သီချင်းဆိုတတ်ကြသည်။ ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀များတွင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲရသောအချိန်များ ရှိသလို ပျော်ရွှင်ချိန်များကိုလည်းဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ၀မ်းနည်းရသောအချိန်အခါများတွင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အထံတော်သို့ သာ၍တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက် စွာဖြင့် သီချင်းဆိုသည့်အချိန်များတွင်လည်း ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ထာဝရဘုရား၏ အထံတော်ကို ပို၍တိုးဝင် ချဉ်းကပ်သောသား သမီးများဖြစ်ရန် ထာဝရဘုရားအလိုရှိပါသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၄ နှင့် ၁၅(က) တွင် “နာသောသူရှိလျှင်၊ သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍ သူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ နာမတော်ကိုအမှီပြုလျက်၊ လူနာကိုဆီနှင့် လူး၍ သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ ပဌနာသည် လူနာကိုကယ်ဆယ်၍၊ သခင်ဘုရားသည် သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်။” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မနာမကျန်းဖြစ်သောသူတို့ကို ခံစားရသော ရောဂါဝေဒနာများမှ ပေးပျောက်စေနိုင်သူ ဖြစ်သည်ကို မိတ်ဆွေ စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လက်ခံ စေလိုပါသည်။ (ဧဖက် ၃း၂၀) တွင် “ငါတို့၌ ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း၊ ငါတို့တောင်း ပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာ ပြုခြင်းငှါတတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည်၊” ဟုဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသည့် အရာများထက်ပင် ပို၍တတ်နိုင်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။
အနည်းငယ်ထပ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင် အသင်းတော် (သို့) သင်းအုပ် တို့သည် လူနာကိုပေးပျောက်စေ သောသူ မဟုတ်ဘဲ၊ သင်းအုပ်အားဖြင့် (သို့) အသင်းတော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မနာမကျန်းဖြစ်နေသူကို မနာမကျန်း ဖြစ်ခြင်းမှ သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ် သည်။ ဤနေရာတွင် အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. “Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. ဟုသုံးနှုံး ထားခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မနာမကျန်းဖြစ်နေသော အသင်းသား တစ်ဦးကို ဆီနှင့် လူးကာ ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက် အသင်းထောက်လူကြီးများ (Elders) တွင်လည်းတာဝန် ရှိသည်ကိုဖော်ပြလိုသည်။
အသင်းတော်တွင်မနာမကျန်းဖြစ်နေသူအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက် (၄) ချက်ကို ဆင်ခြင်သတိရစေလိုပါသည်။
အဆင့် ၁။ မနာမကျန်းဖြစ်နေသူက သင်းအုပ် (သို့)သင်းထောက်လူကြီး (သို့) အသင်းတော်ကို အသိပေးအကူအညီ တောင်းခံရပေမည်။ မနာမကျန်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရာ၌ ကိုယ်ကာယနှင့် သက်ဆိုင်သော မနာမကျန်းဖြစ်မှု၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရမနာမကျန်းဖြစ်မှု၊ ၀ိညာဉ်ရေးရာအရ မနာမကျန်း ဖြစ်မှု နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် မသည်းခံနိုင်တော့လောက်အောင်ခံစားရသော မနာမကျန်းဖြစ်မှု စသဖြင့် အလွန်ကျယ်ဝန်းပေသည်။ သင်းအုပ် (သို့) သင်းထောက် လူကြီးများကို ခေါ်ဆို၍ ဆုတောင်းရခြင်းမှာ ထိုသူတို့သည် သူတို့သည် အသင်းတော်ကိုယ်စားဖြစ်ရုံမက ဘုရားသခင်နှင့်မည်သို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမည်ကို သိကျွမ်းသောသူ များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂။ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်တွင် The elders go to the sick person ဟုဖော်ပြခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်။ အသင်းတော်မှ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ သွားရောက်နိုင်သူ သုံး လေးယောက် ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့လိုက်သွားသင့်ပါသည်။ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ အများ၏ဆုတောင်းခြင်းသည် သာ၍ထိရောက်နိုင်ပေသည်။
အဆင့်၃။ လူနာကိုဆီနှင့် လူး၍ သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ ဟုဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်ကို သတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်။ မည်သည့် ဆီဟုဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း သံလွင်ဆီကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်မည်ဟု အများကသဘောတူ လက်ခံထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဆီ ကို ကျန်းမာခြင်းနှင့် ခွန်အား၏ ပြယုဂ်လက္ခဏာအဖြစ်သုံးနှုံးလေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးသောသူဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ဖြစ်စေရန် ဘုရင်တို့ကို ဆီနှင့်လူးလေ့ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် လူနာအား ဆီနှင့်လူးခြင်းသည် ကျန်းမာခြင်းအခွင့်သည် ဘုရားသခင်ထံမှစီးလာသော ကောင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းအောက်မေ့ သတိရရန်နှင့် လူနာ၏စိတ်တွင် ဘုရားသခင်သင်နှင့်အတူရှိသည်၊ ဘုရားသခင်သည် သင့်အနာရောဂါအားလုံးကို ပေးပျောက်နိုင်သောသူဖြစ်သည် ဆိုသည့် ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဆီနှင့် လူးသည့်အချိန်တွင် သန့်ရှင်းသောနာမတော်မြတ်၌ လူးရန်ဖြစ် သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
အဆင့် ၄။ အပိုဒ် (၁၅) တွင် အထက်ပါအတိုင်းပြုလျှင် ကျန်းမာခြင်း အခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်၏ ကတိကိုတွေ့ရသည်။ “သခင်ဘုရားသည် သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်။” တစ်ခုတော့ရှိသည်၊ အဆင့် ၁ မှ ၃ အထိ ကိုလိုက်လျှောက်ရာတွင် ဘုရားသခင်အား အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၅ နှင့် ၁၆ တွင် “သူသည် အပြစ်ပြုမိသော်လည်း ထိုအပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမည်။ အချင်းချင်း တယောက်နှင့်တယောက်၊ ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြတောင်းပန်ကြလော့၊ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း အချင်းချင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းကြလော့။ သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီးသောပဌနာသည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏။” ဟုဖော်ပြထားသည်။
သူသည် အပြစ်ပြုမိသော်လည်း (If he has sin…..) ဆိုသည့် အပိုဒ်ကို တနည်းအားဖြင့် ဤသို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်နိုင်သည်။ “သူ၏မနာမကျန်း ဖြစ်နေမှုသည် သူပြုခဲ့ မိသော အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လျှင်. . .”။ ဘုရားသခင် မကြိုက်နှစ်သက်သော လောကအပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျူးလွန်မိသူသည် သူ၏ခန္ဓာတွင် မနာမကျန်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ (ဆာလံ ၃၂း၃-၅) တွင် ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက “ထာဝရဘုရား အပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်၍လှည့်စားတတ်သော စိတ်သဘောထားနှင့် ကင်းစင်သောသူသည် မဂ်လာရှိ၏၊၊ ငါသည်အပြစ်ကို မဘော်မပြဘဲ နေစဉ်အခါတနေ့လုံး ညည်းတွားသောအားဖြင့် ငါ့အရိုးတို့သည် ဆွေးမြေ့ခြင်းသို့ရောက်ရ၏၊၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်ကိုယ်တော်၏လက်သည် အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလေး၍ အကျွန်ုပ်၏ ချွေးသည် နွေကာလ၌ သွေ့ခြောက်ခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏၊၊ တဖန်အကျွန်ုပ် သည် ကိုယ်အပြစ်ကို ရှေ့တော်၌ ဝန်ချပါ၏၊၊ ပြုမိသော ဒုစရိုက်ကို ဝှက်၍ မထားပါ၊၊ ငါလွန်ကျုးသောအရာကို ထာဝရဘုရားအား ဘော်ပြတောင်းပန် မည်ဟု ပြောဆိုသောအခါ ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားခြင်း အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူ၏၊၊” ဟု သူ၏အပြစ်ရှိသောအချိန်တွင် ခံစားခဲ့ရသည့် အရာကို ဖော်ပြရေးသားခဲ့သည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ထံ အပြစ်ဝန်ချ တောင်းခံရန်အတွက် မိမိတို့အပြစ်များကို ဘော်ပြရန်အတွက် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးများသည် အကောင်းဆုံးသော သူများဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ အပြစ်ကို ဘော်ပြ ပြီးမှ ခွင့်လွတ်ခြင်းတရားကို အသနားခံရန်ဘုရားရှင်အလိုရှိပါသည်။
ထိုနောက် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ “သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍ အရှိန်ကြီးသောပဌနာသည် အလွန်တန်ခိုးပါ၏။” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤအပိုဒ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မနာမကျန်းဖြစ်သူတွင် မည်သည့် အစွမ်းအစ၊ အရည်အချင်းမျှပင် မရှိလင့်ကစား ဆုတောင်းပေးသောသူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါက သူ၏ဆုတောင်းချက်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟုနားလည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်တွင်မူ “The prayer of faith….” ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသူ၏ ဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
Missionary Hudson Taylor သည် သူ၏ပထမဦးဆုံးသော တရုတ်နိုင်ငံ ဧ၀ံဂေလိခရီးစဉ်အဖြစ် သဘောင်္ တစ်စီးတွင်လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့စဉ်က ဆူမထရာ နှင့် မလေးကျွန်းဆွယ်တ၀ိုက်အရောက်တွင် သူ၏အိပ်ခန်းတံခါးကို ကပ္ပတိန်မှလာခေါက်ပြီး။
“မစ္စတာတေလာ လေလုံးဝမတိုက်လို့ သင်္ဘောတစီးလုံး ဘယ်မှမရွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သည်အတိုင်းဆက်သွားရင် ရှေ့က ကျွန်းကလေးတွေက လူသားစား လူရိုင်းတွေရဲ့ အန္တရယ်ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိတယ်”
“ခင်ဗျားက ဘုရားကိုယုံကြည်သူဆိုတော့ လေလာဖို့ ဆုတောင်းပါ”
“ကောင်းပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ရွက်ကိုတော့လွင့်ထားပါ” တေလာ ကပြန်ဖြေသည်။
ကပ္ပတိန်ကစောဒကတက်သည် “လေမှ မတိုက်တာ ရွက်ကိုလွှင့်ထားခိုင်း ရင် သင်္ဘောသားတွေငါ့ကို အရူးလို့ ဟားတိုက်ရီလိမ့်မယ်” သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးသဘောတူ ကာ ရွက်ကိုလွှင့်ထားခိုင်းလိုက်သည်။ ၄၅ မိနစ်ခန့် ကြာသောအခါ ကပ္ပတိန်ပြန်ရောက်လာရာ မစ္စတာတေလာ သည် ဆုတောင်း၍ ကောင်းဆဲဖြစ်သည်။ လေများတိုက်ခတ်လာသောကြောင့် ဆုတောင်းခြင်း အမှုကို ရပ်လိုကရပ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားရန်အတွက် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေ . . .လေ တိုက်တိုက် မတိုက်တိုက် ဘုရားရှင်ထံမှာ တောင်းရင် ရမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ရွက်ကိုချထားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ မစ္စတာ ဟဒ်ဆင်တေလာ လိုပဲ သင့်ရဲ့ဘ၀ကို ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ရွက်လွှင့် ပြီးလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒမွန်ပြုရင်း. . . .။
မှတ်ချက်။ Brian Bill ၏ တရားဟောချက်တစ်ခုဖြစ်သော How to pray for healing ကို ကိုးကားထားပါသည်။
This entry was posted on December 16, 2010 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Thawngno and tagged Prayer, Thawngno.
83,981 Since July 2011